21 Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jizọs gosiri ndị na-eso ụzọ ya onwe ya ọzọ n’oké osimiri Taịbirias; ma ọ bụ otú a ka o si gosi ha onwe ya. 2 Saịmọn Pita na Tọmọs, onye a na-akpọ Ejima,+ nọ, tinyere Nataniel+ onye Kena nke Galili na ụmụ Zebedi+ na mmadụ abụọ ọzọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya. 3 Saịmọn Pita sịrị ha: “Ana m aga igbu azụ̀.” Ha wee sị ya: “Anyị onwe anyị ga-eso gị gaa.” Ha wee gaa, banye n’ụgbọ mmiri ha. Ma ọ dịghị nke ha gbutere n’abalị ahụ.+ 4 Otú ọ dị, mgbe chi na-achọ ịbọ, Jizọs guzoro n’ikpere osimiri ahụ, ma ndị na-eso ụzọ ya aghọtaghị na ọ bụ Jizọs.+ 5 Jizọs wee sị ha: “Ụmụntakịrị, ùnu nwere ihe oriri ọ bụla?” Ha zara ya “Ee e!” 6 O wee sị ha: “Wụnyenụ ụgbụ n’akụkụ aka nri nke ụgbọ mmiri unu, unu ga-egbute azụ̀.”+ Ha wee wụnye ya, ma ha enwekwaghị ike ịdọbata ya n’ihi otú azụ̀ si dị ọtụtụ.+ 7 Ya mere, onye ahụ na-eso ụzọ Jizọs, bụ́ onye ọ hụrụ n’anya,+ sịrị Pita:+ “Ọ bụ Onyenwe anyị!” N’ihi ya, mgbe Saịmọn Pita nụrụ na ọ bụ Onyenwe anyị, o yiiri uwe elu ya, n’ihi na ọ gba ọtọ. O wee maba n’oké osimiri ahụ. 8 Ma ndị ọzọ bụ́ ndị na-eso ụzọ Jizọs ji obere ụgbọ mmiri bịa, n’ihi na ha anọghị ebe dị anya n’elu ala. Ha nọ naanị ihe dị ka narị amaụkwụ atọ site n’ebe ahụ. Ha wee dọlite ụgbụ ahụ azụ̀ juru. 9 Otú ọ dị, mgbe ha pụtara n’elu ala, ha hụrụ icheku ọkụ+ nke na-enwu n’ebe ahụ na azụ̀ dị n’elu ya nakwa achịcha. 10 Jizọs sịrị ha: “Wetanụ ụfọdụ n’ime azụ̀ ndị unu gbutere ugbu a.” 11 Ya mere, Saịmọn Pita banyere n’ụgbọ mmiri wee dọpụta ụgbụ ahụ nnukwu azụ̀ juru n’elu ala, ha dị otu narị azụ̀ na iri ise na atọ. Ọ bụ ezie na azụ̀ ndị ahụ dị nnọọ ọtụtụ, ụgbụ ahụ adọkaghị. 12 Jizọs wee sị ha: “Bịanụ, rie nri ụtụtụ.”+ Ọ dịghị otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya nwere obi ike ịjụ ya, sị: “Ònye ka ị bụ?” n’ihi na ha maara na ọ bụ Onyenwe anyị. 13 Jizọs bịara were achịcha ahụ nye ha,+ nyekwa ha azụ̀ ahụ. 14 Nke a bụ nke ugboro atọ+ Jizọs pụtara n’ihu ndị na-eso ụzọ ya kemgbe e si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite ya. 15 Mgbe ha risịrị nri ụtụtụ, Jizọs sịrị Saịmọn Pita: “Saịmọn nwa Jọn, ị̀ hụrụ m n’anya karịa ihe ndị a?”+ O wee sị ya: “Ee, Onyenwe anyị, ị maara na m hụrụ gị n’anya nke ukwuu.”+ Ọ sịrị ya: “Na-azụ ụmụ atụrụ m.”+ 16 Ọ sịkwara ya nke ugboro abụọ: “Saịmọn nwa Jọn, ị̀ hụrụ m n’anya?”+ O wee sị ya: “Ee, Onyenwe anyị, ị maara na m hụrụ gị n’anya nke ukwuu.” Ọ sịrị ya: “Na-azụ ụmụ atụrụ m.”+ 17 O wee sị ya nke ugboro atọ: “Saịmọn nwa Jọn, ị̀ hụrụ m n’anya nke ukwuu?” O wee wute Pita na ọ jụrụ ya nke ugboro atọ, sị: “Ị̀ hụrụ m n’anya nke ukwuu?” O wee sị ya: “Onyenwe anyị, ị maara ihe niile;+ ị maara na m hụrụ gị n’anya nke ukwuu.” Jizọs wee sị ya: “Na-azụ ụmụ atụrụ m.+ 18 N’ezie, n’ezie, ana m asị gị, Mgbe ị bụ nwata, ị na-eke ákwà n’úkwù, na-ejegharị ebe ị chọrọ. Ma mgbe ị ga-eme agadi, ị ga-agbatị aka gị, onye ọzọ ga-ekekwa gị ákwà n’úkwù,+ durukwa gị gaa n’ebe ị na-achọghị.”+ 19 O kwuru ihe a iji mee ka a mata ụdị ọnwụ ọ ga-anwụ+ iji nye Chineke otuto.+ Ya mere, mgbe o kwusịrị ihe a, ọ sịrị ya: “Na-eso m.”+ 20 Mgbe Pita tụgharịrị, ọ hụrụ onye ahụ na-eso ụzọ Jizọs, bụ́ onye Jizọs hụrụ n’anya,+ ka ọ na-eso ha, ya bụ, onye ahụ nke dalara azụ wee dabere n’obi ya n’oge nri anyasị ahụ, sị: “Onyenwe anyị, ònye bụ onye ahụ nke na-arara gị nye?” 21 Mgbe Pita hụrụ ya, ọ sịrị Jizọs: “Onyenwe anyị, gịnị ka onye a ga-eme?” 22 Jizọs sịrị ya: “Ọ bụrụ na ọ bụ uche m ka ọ nọgide ruo mgbe m ga-abịa,+ ọ̀ gbasara gị? Gị onwe gị, na-eso m.” 23 Ya mere, okwu a gbasara n’etiti ụmụnna, na onye ahụ na-eso ụzọ agaghị anwụ. Otú ọ dị, Jizọs agwaghị ya na ọ gaghị anwụ, kama: “Ọ bụrụ na ọ bụ uche m ka ọ nọgide+ ruo mgbe m ga-abịa, ọ̀ gbasara gị?” 24 Onye a bụ onye ahụ na-eso ụzọ Jizọs+ nke na-agba àmà banyere ihe ndị a, onye dekwara ihe ndị a, anyị makwaara na àmà ọ na-agba bụ eziokwu.+ 25 N’eziokwu, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ Jizọs mere, bụ́ ndị, ọ bụrụ na e dee ha edee n’ụzọ zuru ezu, m chere na ụwa apụghị ịba akwụkwọ mpịakọta ndị e dere ha.+